17 Jun 2018 . 7:13 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေထဲမှာ အသေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အိုက်စလန်နိုင်ငံက လက်ရွေးစင်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာပဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့်သွားအောင် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို (၂)ကြိမ်တိုင် ရခဲ့တဲ့အပြင် ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ဗိုလ်စွဲဖို့အသင်းတွေထဲမှာ တစ်သင်းအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ နာမည်ကြီး အာဂျင်တီးနားအသင်းကို တစ်ဂိုးစီ သရေကစားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိုက်စလန်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ယူရို-၂၀၁၆ ပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်း Shock Results တွေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းပါ။ အုပ်စုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သလို ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာလည်း သူတို့နဲ့အဆပေါင်းများစွာ ကွာခြားတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ပြင်သစ်ကို ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ဂုဏ်မငယ်ခဲ့ဘဲ အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အမြင့်မားဆုံး အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အိုက်စလန်အသင်းဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ အာဂျင်တီးနားနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တာကြောင့် ဂိုးပြတ်မရှုံးဖို့ဘဲ ဆုတောင်းရမယ်လို့ ပရိသတ်တွေ ထင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ မထင်မှတ်လောက်အောင် အာဂျင်တီးနားဆီက သရေတစ်မှတ်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ လူဦးရေ (၃)သိန်းကျော်သာရှိတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုက လက်ရွေးစင်အသင်းဟာ အခုဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးကဘောလုံးပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြီ။ တကယ်တော့ အိုက်စလန်အသင်းမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားနေတဲ့ ဘောလုံးသမားစစ်စစ်က လက်ချိုးရေလို့ရပြီး ပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဆိုလို့ အဲဗာတန်ကွင်းလယ်လူ ဆီဂတ်ဆန် Sigurdsson သာပါဝင်သလို သူတို့ထဲက ကစားသမား(၅)ဦးက ဆရာဝန်တွေပါ။
သူတို့အသင်းရဲ့နည်းပြ ဟောဂရင်ဆင် Hallgrímsson က သွားဆရာဝန်ပါ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမား မက်ဆီ Messi ရဲ့ ပယ်နယ်တီကို ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ကာကွယ်သွားခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားကြီး ဟောဒေါ်ဆင် Halldorsson ဆိုရင် ဂိုးသမားမဖြစ်ခင်တုန်းက Zombie ကားတွေရိုက်ကူးတဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ရိုက်ကူးနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် အခုအချိန်မှာလည်း ပရိသတ်တွေကို Thrill ဖြစ်အောင် လုပ်ပြသွားခဲ့တာလားလို့တောင် ထင်မှတ်စရာပါပဲ။ ကွင်းလယ်လူ ဂတ်မန်ဆင် Guðmundsson ဆိုရင် ငယ်ငယ်က Counter Strike ဂိမ်းကစားတာ အရမ်းကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပြီး အရင်က Rock ဂီတအဖွဲ့တစ်ခုမှာ ဂစ်တာတီးတဲ့သူပါ။
အိုက်စလန်နိုင်ငံဟာ အရမ်းအေးလွန်းလို့ ဘောလုံးကစားချင်တဲ့ ကလေးသူငယ်တွေက အပူပေးထားတဲ့ မိုးလုံလေလုံ Indoor Stadium ထဲမှာ စုပေါင်းကစားရတဲ့နိုင်ငံ။ အဲဒီလိုနိုင်ငံက အခုဆိုရင် ဖီဖာကမ္ဘာ့အဆင့်(၂၂)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး နာမည်ကြီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆွီဒင်၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဆားဘီးယား၊ ယူကရိန်းအသင်းတွေထက်တောင် ရပ်တည်မှုမြင့်မားနေတယ်။ အခုအချိန်မှာ အိုက်စလန်နိုင်ငံသားတွေကတော့ သူတို့အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ယူရို-၂၀၁၆မှာ အံ့အားသင့်စရာတွေဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အိုက်စလန်အသင်း အခု ကမ္ဘာ့ဖလားမှာလည်း ဘယ်လို Miracle Result တွေ ရယူသွားဦးမှာလဲ . . . . .
Photo: Goal,Tribuna,Independent,Getty Images
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲဝငျအသငျးတှထေဲမှာ အသေးဆုံးနိုငျငံဖွဈတဲ့ အိုကျစလနျနိုငျငံက လကျရှေးစငျအသငျးဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးကမ်ဘာ့ဖလားပှဲမှာပဲ တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှကေို အံ့အားသငျ့သှားအောငျ လုပျပွနိုငျခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို (၂)ကွိမျတိုငျ ရခဲ့တဲ့အပွငျ ဒီနှဈကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ဗိုလျစှဲဖို့အသငျးတှထေဲမှာ တဈသငျးအပါအဝငျဖွဈတဲ့ နာမညျကွီး အာဂငျြတီးနားအသငျးကို တဈဂိုးစီ သရကေစားနိုငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ အိုကျစလနျအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ယူရို-၂၀၁၆ ပွိုငျပှဲတုနျးကလညျး Shock Results တှရေယူနိုငျခဲ့တဲ့အသငျးပါ။ အုပျစုကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့သလို ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာလညျး သူတို့နဲ့အဆပေါငျးမြားစှာ ကှာခွားတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး ကှာတားဖိုငျနယျကို တကျရောကျနိုငျခဲ့တယျ။ ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ပွငျသဈကို ဂိုးပွတျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ ဂုဏျမငယျခဲ့ဘဲ အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အမွငျ့မားဆုံး အောငျမွငျမှုတဈခုကို ရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အိုကျစလနျအသငျးဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမှာ ပထမဆုံးအကွိမျခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမှာ အာဂငျြတီးနားနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တာကွောငျ့ ဂိုးပွတျမရှုံးဖို့ဘဲ ဆုတောငျးရမယျလို့ ပရိသတျတှေ ထငျခဲ့ကွပမေယျ့ ဘယျသူမှ မထငျမှတျလောကျအောငျ အာဂငျြတီးနားဆီက သရတေဈမှတျရယူနိုငျခဲ့တယျ။ လူဦးရေ (၃)သိနျးကြျောသာရှိတဲ့ နိုငျငံငယျလေးတဈခုက လကျရှေးစငျအသငျးဟာ အခုဆိုရငျ တဈကမ်ဘာလုံးကဘောလုံးပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံကို ဖမျးစားနိုငျခဲ့ပွီ။ တကယျတော့ အိုကျစလနျအသငျးမှ ပရျောဖကျရှငျနယျကစားနတေဲ့ ဘောလုံးသမားစဈစဈက လကျခြိုးရလေို့ရပွီး ပရိသတျနဲ့ရငျးနှီးပွီးသားဆိုလို့ အဲဗာတနျကှငျးလယျလူ ဆီဂတျဆနျ Sigurdsson သာပါဝငျသလို သူတို့ထဲက ကစားသမား(၅)ဦးက ဆရာဝနျတှပေါ။
သူတို့အသငျးရဲ့နညျးပွ ဟောဂရငျဆငျ Hallgrímsson က သှားဆရာဝနျပါ။ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဘောလုံးသမား မကျဆီ Messi ရဲ့ ပယျနယျတီကို ပဉ်စလကျဆနျဆနျ ကာကှယျသှားခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားကွီး ဟောဒျေါဆငျ Halldorsson ဆိုရငျ ဂိုးသမားမဖွဈခငျတုနျးက Zombie ကားတှရေိုကျကူးတဲ့ ဒါရိုကျတာဖွဈပါတယျ။
ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ ရုပျရှငျကားတှကေို ရိုကျကူးနတေဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့ အခုအခြိနျမှာလညျး ပရိသတျတှကေို Thrill ဖွဈအောငျ လုပျပွသှားခဲ့တာလားလို့တောငျ ထငျမှတျစရာပါပဲ။ ကှငျးလယျလူ ဂတျမနျဆငျ Guðmundsson ဆိုရငျ ငယျငယျက Counter Strike ဂိမျးကစားတာ အရမျးကောငျးတဲ့သူဖွဈပွီး အရငျက Rock ဂီတအဖှဲ့တဈခုမှာ ဂဈတာတီးတဲ့သူပါ။
အိုကျစလနျနိုငျငံဟာ အရမျးအေးလှနျးလို့ ဘောလုံးကစားခငျြတဲ့ ကလေးသူငယျတှကေ အပူပေးထားတဲ့ မိုးလုံလလေုံ Indoor Stadium ထဲမှာ စုပေါငျးကစားရတဲ့နိုငျငံ။ အဲဒီလိုနိုငျငံက အခုဆိုရငျ ဖီဖာကမ်ဘာ့အဆငျ့(၂၂)နရောမှာ ရပျတညျနပွေီး နာမညျကွီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ဆှီဒငျ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ဆားဘီးယား၊ ယူကရိနျးအသငျးတှထေကျတောငျ ရပျတညျမှုမွငျ့မားနတေယျ။ အခုအခြိနျမှာ အိုကျစလနျနိုငျငံသားတှကေတော့ သူတို့အသငျးရဲ့အောငျမွငျမှုအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျနမှော အမှနျပါပဲ။ ယူရို-၂၀၁၆မှာ အံ့အားသငျ့စရာတှဖွေဈအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့တဲ့ အိုကျစလနျအသငျး အခု ကမ်ဘာ့ဖလားမှာလညျး ဘယျလို Miracle Result တှေ ရယူသှားဦးမှာလဲ . . . . .